China Gabion Mesh Machine rụpụta na Factory | Jiake
Nnennen akara waya ịbịaru igwe
Nodị No.: LNML
Gabion ntupu igwe, na-akpọ oké ọrụ hexagonal waya ntupu igwe ma ọ bụ gabion nkata igwe, bụ na-emepụta hexagonal waya ntupu maka mkwado nkume igbe iji. The hexagonal waya netting igwe bụ a pụrụ iche ịkpa igwe na-echepụta hexagonal meshwork.
A na-eji meshes hexagonal dị arọ maka nchedo ala, iwu ụlọ, ọrụ ugbo, mmanụ ala, ụlọ ọrụ kemịkal, ọkpọkọ ọkụ, mmiri mmiri, ugwu, ụzọ, na akwa, wdg.
Waya n'obosara: 1.6-3.5mm
Ntupu size: 60-150mm
Ntupu Obosara: 2300-4300mm
Ọsọ: 165-255m / h
Number nke twists: 3 ma ọ bụ 5
The usoro akpaka gabion igwe na-agụnye anọ isi ọkọlọtọ akụkụ: Main netting igwe, asọfe igwe, waya erughị ala ngwaọrụ, na gburugburu coiling igwe, ọ nwere ike na-emepụta gabions nke dị iche iche widths na ntupu nha. Anyị igwe na-akpan iji na-emepụta nnukwu size na oké-oru hexagonal (kpaliri, galvanic & ịkwanyere waya) waya meshes maka nsu na nkume gabions ojiji.
.Dị Ntupu size(mm) Oke obosara(mm) Waya dayameta(mm) Nọmba agbagọ Main mbanye aro ọsọ Moto(kw) Ọsọ(m / h)
3.Superiorities nke eriri njikọ eriri mmepụta akara
Gabion ntupu igwe, na-akpọ oké-oru hexagonal waya ntupu igwe, na-eji na-emepụta gabion ntupu na nkume igbe, ọtụtụ-eji na odida obodo nchedo, ewu, ugbo, mmanụ ala, chemical ụlọ ọrụ, kpo oku ọkpọkọ, seawall, ugwu, ụzọ, na akwa , wdg.
1.Mitsubishi PLC & Touch ihuenyo, Schneider electronic, Invt inverter.
2. Inside nke crossbeam, e nwere ndị bekee based, welded 12mm. nkwụsi ike dị elu, ike siri ike na-awụ akpata oyi n'ahụ-iguzogide (imepụta ọhụrụ).
3. A na-emepụta crossbeam na ikpo okwu pụrụ iche nwere oke nkenke. Enwere ike ịme nkwa ahụ. Emechara igwe igwe na ikpo okwu puru iche. The n'ozuzu arụmọrụ na-mma.
4. Igwe anyị na-eji mkpara ịkwọ ụgbọala abụọ karịa otu mkpanaka ịkwọ ụgbọala, ọsọ ọsọ ọsọ & na-agba ọsọ.
5. Igwe ahụ nakweere ngwaọrụ pụrụ iche iji mee ka mmanu mmanu jiri ya mee ihe.
6. Ọhịa ọla kọpa nke igwe anyị nwere arụmọrụ abrasion dị mma, ka mma maka ntụgharị axis.
7. Igwe igwe akụrụngwa nke igwe ahụ bụ ihe nkedo ígwè, na-adịgide adịgide.
8. Igwe cam nke igwe bu nodular cast cast, inogide.
9. Efere na-adọkpụ dị na mkpuchi, ogologo ọrụ ndụ.
10. Mgbe waya na-agbajikwa na gburugburu waya na-eji elu, igwe nwere ike ịkwụsị ọrụ na-akpaghị aka.
4. Emechara ngwaahịa
A na-eji ntupu Gabion mee igwe eji eji waya eme akwa ma ọ bụ igbe okwute, nke a na-ejikarị na-echebe ma na-akwado oke mmiri, ugwu, okporo ụzọ na akwa mmiri, ọdọ mmiri na injinịa obodo ọzọ, ọ bụkwa ihe kachasị mma maka ide mmiri ahụ.
Gabion ntupu (Hexagonal waya ntupu) na-ọtụtụ-eji fencing, nzacha ntupu na residential na odida obodo nchedo, ewu, ugbo, mmanụ ala, chemical ụlọ ọrụ, kpo oku ọkpọkọ, na ndị ọzọ na ọkpọkọ ngwugwu waya ntupu.
Enviromesh Gabions igwe
Gabion nkata ntupu Machine
Gabion ntupu Bunnings Machine
Gabion ntupu Ibé akwụkwọ Machine
Gabion Wall ntupu Machine
Gabion Wall Waya ntupu Machine
Gabion Waya ntupu Machine
Gabion Waya ntupu ogwe igwe
Nrụgide oru hexagonal Gabion ntupu Machine
Steel ntupu Gabion ngị igwe
Welded ntupu Gabion nkata Machine
Welded ntupu Gabions Machine
Waya ntupu N'ihi Gabion Wall Machine